Aarthik Abhiyan:प्रदेश ०५
माछापालनमा कृषकको आकर्षण : ८९ करोड ४६ लाख लगानी
साउन २५, दाङ । दाङको मत्स्यापालन उद्योगमा करीब साढें ८९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा ७० ओटा मत्स्य उद्योग दर्ता गरेर व्यवसायीक रुपमा माछापालन गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा गएको आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ सम्म दर्ता भएका मत्स्यपालन उद्योगमा रू.८९ करोड ४६ लाख...
१२ फर्निचर पसल र १ डेण्टलमा आगलागी हुँदा ३ करोडको क्षति
साउन २४, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज सुर्खेतरोडको गुरुद्वारा अगाडि रहेका पसलहरुमा आगलागी हुँदा रू. ३ करोड बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । गुरुद्वारादेखि उपमहानगरपालिका छेउसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी फर्निचर पसल आगलागीबाट खरानी भएका छन् । आगलागीबाट हिमालय स्टिल, सानिया स्टिल, स्टार स्टिल, वारसी स्टिल, बि...
लमही–कोइलावास सडक : मुआब्जा बढाउन माग गर्दै आन्दोलन
दाङ । हुलाकी सडकअन्तर्गत दाङको लमही–कोइलावास खण्डका स्थानीयवासी मुआब्जा रकम बढाउन माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलनस्वरूप उनीहरूले बिहीवार बिहान पूर्व–पश्चिम राजमार्ग २ घण्टा बन्द गरेका छन् । उक्त सडक खण्डमा पर्ने सिम्रहवा क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन चलनचल्तीको भन्दा निकै कम भएको...
बस्ती नै बाढीको जोखीममा
प्रवीर ददेल रुकुम । रुकुम पश्चिमको एक बस्ती बाढीको जोखीममा छ । अविरल वर्षापछि ठूलीभेरी नदीको कटानले आठबीसकोट नगरपालिका–६ मनकाबगर गाउँ जोखिममा परेका हो । बाढीले यहाँका तीन घर बगेका छन् भने ८ घर उच्च जोखिममा छन् । स्थानीयका अनुसार बाढीले पत्रे बोहरा र भीमबहादुर थापाको घर बगाएको छ । यस्तै अ...
घोराही उपमहानगरको बजेट खर्च ९०%
दाङ (अस) । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका गत आवमा कुल बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । गत आवको कुल रू. १ अर्ब ४९ करोड २६ लाख ८३ हजार बजेटमध्ये १ अर्ब ३५ करोड ३२ लाख १ हजार खर्च भएको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत भीमबहादुर चौधरीले बताए । यस्तै विकासतर्फ रू. ५७ करोड ६८ लाख ९८ हजारमध्ये ५० करोड ५६...
‘४ महीनाभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन’
रूपन्देही । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सफल भए नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल हुने बताएका छन् । बिहीवार भैरहवामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । विमानस्थलका साथै यससँग...
बाँकेमा युरिया मलको अभाव
बाँके (अस) । जिल्लामा धान उत्पादनका लागि अत्यावश्यक युरिया मलको अभाव भएको छ । मल वितरण गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको जिल्लास्थित कार्यालयमा मलको मौज्दात सकिएको हो । जिल्लामा सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी यी दुई कम्पनीले पाएका छन् । किसानको माग बढी ह...
५४ प्रकारका नेपाली जडिबुटी निर्यातमा रोक, भारतको प्लान्ट क्वारन्टाईनको सूचीमा परेन
साउन २३, बाँके । भारतले सरकारले आफ्नो प्लान्ट क्वारेन्टाईनको सूचीमा समावेश नभएका ५४ प्रकारका नेपाली जडिबुटी निर्यातमा रोक लगाएको छ । २०७५ फागुनदेखि जडिबुटी निकासी नहुँदा ४ हजार टन जडिबुटी नेपालगञ्जमै थन्किएको छ । भारतीय क्वारेन्टाईनद्वारा सूचिकृत नगरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी जडिबुटी बिगतमा भारत निकासी...
लमही–कोइलावास हुलाकी मार्ग : मुआब्जा बृद्धि गर्न माग गर्दै स्थानीय सडकमा
साउन २३, दाङ । हुलाकी सडकअन्तर्गत दाङको लमही–कोइलावास सडकखण्डका स्थानीयहरु आफूलाई दिने मुआब्जा कम भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले बिहीवार विहान दुई घण्टा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरोध गरी विरोध जनाएका थिए । लमही–कोइवासाव सडकअन्तर्गत सिम्रहवाका स्थानीयहरुले विहान ८ बजे...
एक वडा एक पोखरी : १८ ओटा बृहत् जलाशय निर्माण
साउन २३, घोराही । घोराही उपमहानगरपालिकाले १८ ओटा बृहत् जलाशय निर्माण गरेको छ ।पानीको स्रोत संरक्षणका लागि बृहत जलाशय निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले बताए । विशेष गरेर उत्तरी भेगमा रहेको क्षेत्रमा ठूला ठूला ड्याम निर्माण गरेर जलाशय निर्माण गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले...
महालक्ष्मी बैंकद्वारा वृक्षरोपण
गुल्मीको शान्तिपुरमा नेपाल बैंक
नेपाल बंगलादेश बैंकका ६ शाखा थपिए
अशोक लेल्यान्ड र मितेरी डेभलपमेन्टबीच कर्जा सम्झौता
३ दिनमै कर्जा उपलब्ध गराउँदै ग्लोबल